Ihotele i der Therme Bad Sulza (Bad Sulza) - LOH07343, iApartment 4 abantu
Apartment 4 abantu
Umbono wehlathi elimangalisayo lomlingo, i-corridor ye-bathrobe ikhokelela ngqo kwi-Toskana Therme. I-Hotel an der Therme, ebekwe kwindawo yokuphumla, inamagumbi angama-97 angatshayiyo aphindwe kabini, angatshatanga kunye namagumbi osapho.
Kwindawo enesidima yebhari ye-lobby, ukhetho olwahlukeneyo lweziselo luyakumema ukuba wonwabe. Uyonwabela ukutya kweRestaurant Felix incasa kakhulu kwithambeka lehotele elibukekayo elinombono weToskana Therme.
Ukutyelela kwiziko le-Ayurveda okanye indawo yokufaneleka isebenza ukukhuthaza impilo ezinzileyo. Imisebenzi yolonwabo efana nentenetya yetafile okanye iibhiliyoni zisondeza amava ayimpumelelo ehotele.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-1 295 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo